Maxaad Muqdisho ugu yeeri lahayd Maanta, Ma Mooro Jinni Mise Magaalo Madaxdii Dalka..?!!.
Waxaa Qoray A. D. Elmi
Intii aan dhex marayay bogagga Internet-ka, gaar ahaan kuwa Soomaalida waxaan la kulmayay qoraallo fara badan oo ciwaanadooda ay ka mid ahaayeen " MUQDISHO CAASIMAD MA U QALANTAA..?" iyo " MUQDISHO MA BED QABTO iyo kuwo kale oo fara badan oo hadda aanan soo wada qaadan karin, ma yara inta jeer ee dad fara badan oo siyaasiyiin ah, iyo kuwa kale oo caadi ahba, ay ka hadleen sida Muqdisho laga yeeli doono iyadoon laga baaraan degin guud ahaan maamul la'aanta haysata dalka Soomaaliya. waxaad mooddaa in, in badan lagu mashquulay ka hadlidda ama ka doodidda meel aan xalku jirin. Tusaale ahaan in lagu meeraysto Muqdisho inay caasimad ahaan doonto iyo in kale, la iskana indha tiro raadinta xalka guud ee Soomaaliya, waxay ka dhigan tahay, iyadoo la soo kor dhoobtay qof miyir doorsoomay oo ay hayso Malaria, ka dibna lagu murmo xagtin yar oo qofkaas tabcaanka ah ku taalla oogadiisa, ama lagu mashquulo sababta uu timaha faraha badan ee ku yaalla madaxiisa uu isaga jari waayay, iyadoo si deg deg ah aan loola cararin goobaha caafimaadka.
Buuqu wuu fara badan yahay, dadka qaar ayaa waxay ku taliyeen, in magaalo madaxda dalka laga dhigo tuuladii ay ku dhasheen, mid kale ayaa yiri "Maya u kaadiya Ceelkii BIYO BADANE ee geeleennu ka cabbi jiray ayaa ku habboon in caasimadda dalka loo raro, ninba waa dookhiis iyo doonistiise, meel kala dhac magaallo madaxdii dalka Soomaaliya.
markaan arkay qoraaladaas ayaan anna taagtayda is iri "War adna toloow xageed u rarataa magaallo madaxdii dalka, markaan in cabbaara indhaha ka mirig mirig siinayay ayaan soo xasuustay inuu jiray ceel yar oo waa hore duugmay laakiin hadda tolkey dego, waxaan is iri Allaylehe ma tiraahdaa "War halkaas Caasimadda iigu fura halkaas ayay ku haboontahaye". Laakiin goor danbe oo aanan fikirkayga ka dhawaajin, ayaan is qabtay, intaan Cawdu Bilaystay oo hareeraha iska fiiriyay ayaan iska dhaqaaqay anoon wax go'aan ah gaarin, waxaanna soo xasuustay ceelka tolkay dego in uu mar hore aasmay oo xittaa arigeennii iyo Geelleenii ag daaqi jiray, uu macalluul la wada istaagay.. markaasaan iri "War meel xoolihiiniiba biyo iyo baadba ka waayeen, sideed ugu qancin kartaa in ay qaran dhan caasimad u noqoto... "Muqdishooy xaal qaado waan kuu gafaye" intaan ereyadaas iri ayaan markiiba Moos diirtay, Canbena muudmuudsaday.
MAXAY TAHAY QORMADANI?
Qoraalka kor ku xusan oo laga yaabo in uu dadka qaar xassaasiyad u keeno ayaan ku cabirayaa sida maanta dadka Soomaaliyeed uu qabiilku u naafeeyey, heer uu gaarsiiyay maanta, in ay wax walba ku cabiraan qabiil, ayna dantii qaranku sidaa ku baaba'do.
Haddaan u soo laabto muhimadda qoraalkaygan: Muqdisho anigu ma qabo in lagu meeraysto, iyadoon laga hadlin meel isugu keenidda Soomaali Wayn, Muqdisho waa caasimaddii dalka, waana meel ku haboon in ay dalkan caynkan oo kale ah caasimad u ahaato marka laga hadlayo arimo fara badan sida cimilada, Badda ay kulaalayso, Wabiyada qarka u saaran, dhul beereedyada ku heeraarsan iyo xoolaha nool ee duleedkeeda daaqaya.
Laakiin waa rune, Muqdisha maxaa maanta ka soconaya..? waxaa ka socda maanta Muqdisho waa Shar iyo Khayr, hadba waa kii Ilaah kuu qadaro kuuna soo hormariyo, bal aan soo qaadanno khayrka iyo sharka laga heli karo xilligan magaalada Muqdisho.
MUQDISHO SIDA LA MOODAYO MA AHA, MANA BED QABTO
Safarkii Ibraahim Maxameddeed ee Muqdisho Feb 16, 2003
FAALLO: MUQDISHO CAASIMAD MA U QALANTAA
Fahad Yaasiin ... Feb 7, 2003
Falal Kufsi Iyo Dil Iswata Oo Ku Soo Kordhay Muqdisho GUJI..... Mogadishu Weekly Agosto 6, 2002
Safarkaygii Muqdisho Sii Socod iyo Soo Socod:
Fahayd Yaasiin , Agosto 17, 2001
Socdaalkii Shiike ee Muqdisho...
Maxamed Cabdi Farax - Shiike March 21, 2001
Waxaa socda Dil, Afduub, Kufsi, Dhac iyo ummuuro kale, waxaa magaalada ka muuqda burbur xoog leh, waxaa magaalada dhooban qashin waddooyinka gaaf wareegaya, ma jiraan biyihii guud, korontadii guud, magaalada meelna waa mugdi meelna waa iftiin. arimahan oo dhami waa wax naxdin iyo uur ku taallo kugu reebaya marka aad soo xasuusato bilicdii iyo quruxdii ay lahayd Muqdisho, inkastoo maanta aysan Muqdisho sidii hore ahayn oo aad mooddo in dhibaatooyinkii soo yaraanayaan, haddana waxa dhacaya maalin walba intay doontaba ha leekaatee ayaa qofka Banii'aadamka ah, dhib ugu filan. dadka ku dhaqan Muqdisho naf ahaantooda ayaa khaati Billaah ka joogsaday darxumada haysata, waxayna Ilaah ka baryaan in dawlad khayr qabta Ilaah u dhaliyo, dadka reer Muqdisho waxay iska ilaaween taageeradii ay u hayeen dagaal oogayaasha, oo ay gabi ahaanba ka rajo beeleen, waxaa maanta Muqdisho ku sugan rag ilaallo gaar ah u ahaan jiray dagaal oogayaasha, oo maanta iska shaqaysanaya. hadalkan danbe waxaan ula jeedaa in dadka qaar aan u ifiyo in reer Muqdisho aysan wada xumayn.
Muqdisho inkastoo la isdilayo, inkastoo la is afduubanayo, inkastoo isku dhacyo beeleed ka dhacaan, hadana dhinaca kale wanaag ayaa soconaya, waxaa furan:
*Iskuuladii: Waxaa Muqdisho ka shaqaynaya iskuullo leh manhajyo nidaamsan oo leh Hoose, Dhexe iyo Sareba, waxaana la aaminsan yahay inay dhigtaan iskuuladaas oo subax walba ay u dareeraan arday gaaraysa 16,000 oo arday. iyadoo maanta ay Muqdishana ku nool yihiin dad kor u dhaafaya 2,000,000 oo qof.
*Jaamacadihii: Waxaa Muqdihso ka shaqaynaya jaamacado dhawr ah oo qaarkood leh kuliyadihii kala gadisnaa ayna ka hawl galaan macalimiintii hore ee dalka, ayna dhigtaan tiro gaaraysa ilaa 1600 ilaa 1700 oo arday.
*Machadyo: Waxaa Muqdisho ka shaqaynaya machadyo lagu barto iyagana macluumaad kala gadisan oo qaarkood ay haatan ka hawl galaan macalimiin lagu soo kireeyey lacag aad u fara badan, waxaana dhigta in ka badan 3,700 oo arday
*Dugsi Qur'aanno: Waxa Muqdihso ka furan oo shaqaynaya dugsi qur'aanno qaarkood laga heli karayo maktabado laga daalacan karo funuunta cilmig diinta Islaamka, iyadoo dugsiyadaas ardaydu ay Qur'aanka ku bartaan Tajwiidka, waxaa kaloo dugsiyadaas lagu bartaa, culuumta kale ee islaamka, sida Axaadiistii, Tafsiirkii, Siiradii iyo qaybo kale, tirada dhigataana waad garan kartaa adiguba.
*Carwooyin waawayn: Waxaa Muqdisho ka furan carwooyin waawayn oo habeen iyo maalinba furan, isla markaana ay dhex yaalaan wax walba oo aad uga baahato.
*Shariikadaha Is-gaarsiinta: Waxaa Muqdihso ka shaqaynaya, shariikadaha qaybiya adeegga taleefoonada oo ku shaqeeya System casri ah.
*ISPs: Waxaa Muqdisho ka shaqaynaya shariikado bixiya adeegga Internet-ka oo kala gadisan isla markaana uu tartan ka dhexeeyo.
*Cisbitaallo: Waxaa Muqdisho ka hawl gala, cisbitaallo gaar loo leeyahay oo ay ka hawlgalaan dhakhaatiir aqoon sare leh, isla markaana adeegsada qalab tayadiisu ladan tahay.
*Shariikadaha Duulimaadyada: Waxaa Muqdisho ka jira, shariikado kala gedisan oo maalin walba dalka gudihiisa iyo dibadiisaba dadka u kala daad gureeya.
*Shariikadaha Xawilaadda: Waxaa muqdisho ka jira shariikadaha Xawilaadaha oo dadka Soomaaliyeed u kala gudbiya lacagaha ay isu dirayaan meel kasta oo dunida ka mid ah, oo khidmo yar ka qaata qofka lacagta dirsanaya.
*Korontada: Waxaa Muqdisho ka shaqeeya shariikado bixiya dabka oo ka jira dhamaan xaafadaha kala gedisan ee Muqdisho, qaar ka mid ahna waxay bixiyaan dab, habeen iyo maalinba ah.
*Warshado: Waxaa Muqdisho ka hawl gala, warsahdo kala gedisan oo sameeya Baastada, Nannaca, Bacaha, Isbuunyada, kuwa sifeeya biyaha, Kaartoomada, saabuunada lagu dhaqdo dharka, kuwa lagu qubaysto iyo kuwo kale oo fara badan.
*Idaacado/Talafeeshinno/ Warsidayaal: Waxaa Muqdisho ka hawl gala Idaacado madax bannaan, talafeeshinno iyo Wargaysyo baahiya barnaamijyo kala gedisan oo dadka lagu wacyi galiyo, lana oran karo waxay qayb wayn ka qaateen sidii hoos loogu dhigi lahaa xawligii ay ku socdeen colaaduhu.
*Dhismayaal Qurxoon: In kastoo meela badan oo Muqdisho ka mid ahi, ay jajaban yihiin hadana, waxaa isla Muqdisho ka soconaya dhismayaal aad u qurxoon, oo maalin walba aad arakaysid iyagoo lagu hayo hawl dhisme ah.
Waxba yaanan hadalka kugu daaline, waxaa la oran karaa Muqdisho waxaa ka socda wax san iyo wax xun intaba, Ogowna Muqdisho waa Muqdisho uun, waa miskiin korisadii waa halka haddii aad xabad Rooti ah iyo xabad Muus ah aad is dhex gashato aad ku sii noolaan kartid, muuqaalkaaguna uu waligiis ahaanayo maariin.
Muqdisho waa caasimaddii dalka Soomaaliya, waa Hilib, Waa Caano, Waa Moos, Waa Cambe, Waa Naara Jiin, Waa Bambeelmo, Waa Yaanyo, Waa Babaay Waa Wabi, Waa Bad.
Muqdisho Waa Hooyaddii Xaddaaradda, Waxayna jirtaa in ka badan 1000 sano. Muqdisho wax ma galabsan, dadkeeduna ma wada xuma, ee waxaa loo baahan yahay oo kaliya waa maamul iyo dawlad soo celisa kala danbayntii guud ahaan dalka Soomaaliya. Tan kale Muqdisho maaha tuulo yar oo in istaaqaani, ku dhaqan tahay waa magallo ballaaran oo laga rajaynayo in wax walba ka dhici karaan, ee Soomaaliyeey dhammaan ha loo hawl galo sidii maamul loo wada dhan yahay dalkan loogu heli lahaa........ MUQDISHO WAA MAGAALA MADAXDII DALKA SOOMAALIYA EE MAANTA IYO BARRI........
F.G. Waxaa hubaal ah in qoraalkaygu uu kugu abuuri doono, laba arimood midkood: Farxad ama Cadho/Xanaaq, laakiin kaad doonto ahaaw e' fadlan ii soo qor talo-bixintaada [FEEDBACK-gaaga] iyadoo hal beeggaagu yahay HALBEEG QARAN kan qabiilkana tuuraya.
Afeef: Fikrada qoraalka iyo xuquuqdeeda waxaa leh qoraaga ku saxiixan, waxaana lagu faafin karaa ogolaanshaha qoraaga.